Ngwa maka ụmụ nwoke | Nwoke Nkecha
Ọ bụghị n’oge dị anya gara aga ọ bụ mmadụ ole na ole jiri ya zuru ezu ka ha si eji ejiji ma ugbu a ngwa aghọwo ihe dị mkpa na ụmụ nwoke mara mma, yabụ enyemaka niile mgbe ị na-ahọrọ, ịzụrụ ma ọ bụ ijikọta ha ga-adị obere.
Na udi a Ga - ahụ site na ndụmọdụ gaa na ntinye, site na ngwa ndị na - akpata mmetụta na na setịpụrụ na ọnọdụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbụ nwoke mara mma na onye a ma ama, akwụsịla iji ngwa nwere ike inye gị mmetụ dị iche.
ugogbe anya maka anwụ maka ndị isi nkwọcha
por Ụlọ Ignatius eme Ọnwa 2 .
Ọ bụrụ na ị na-achọ ugogbe anya maka anwụ maka ndị isi nkwọcha, ihe mbụ ị kwesịrị ịma bụ na ọnụọgụ nke…
Ụdị sọks maka ụmụ nwoke
Ọrụ nke sọks ụmụ nwoke aghọwo ihe dị mkpa na ngwa anyị. Anyị masịrị nke ahụ...
Ụdị uwe mkpuchi kachasị mma maka ụmụ nwoke
por Ụlọ Ignatius eme Ọnwa 4 .
N'ahịa anyị nwere ike ịhụ ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụdị uwe ndị nwoke. Ihe mbụ anyị kwesịrị inwe na…
Ụdị okpu iri na otu kacha mma maka ụmụ nwoke
Ịhọrọ n'etiti ụdị okpu dị iche iche nke ụmụ nwoke, n'adịghị ka iko na edozi isi, enweghị…
Tie clip: ka esi etinye ya nke ọma
Tie pin nwere ike ịghọ ihe dị mkpa na uwe nke nwoke mara mma. Ee…
Otu esi ahọrọ iko kacha mma maka ụmụ nwoke
por Ụlọ Ignatius eme Ọnwa 5 .
Mgbe ị na-ahọrọ ụdị enyo ọhụrụ, ọ bụghị naanị na ị ga-adabere na atụmatụ nke ọtụtụ…
Otu esi ehicha elekere nkwojiaka
Ọtụtụ elekere aka bụ iberibe pụrụ iche nke chọrọ mmezi site n'oge ruo n'oge. Ọ bụrụ na ị chere na ị furu efu...
Tiedị nke eriri eriri
Maka ndị ikom na-achọ iyi uwe mara mma, ha nwere ụdị kachasị mma na tie na ụdị mara mma, nke nwere ike ...
Ụdị uwe ụmụ nwoke kacha mma
por Alicia tomero eme Ọnwa 10 .
Anyị ga -arara ngalaba a maka ụdị uwe kacha mma, ndị na -emepụtakarị ọnọdụ n'etiti nwoke mara mma na ...
Watchdị nche okomoko
por Alicia tomero eme Afọ 1 .
Nlele na eriri aka nwoke na-aga n'ihu ịtọ ntọala. Ọtụtụ ogwe aka chọrọ ịnọchite anya ngwa a dị ka mpempe ahụ ...
Họrọ ugogbe anya maka anwụ n’oge kacha mma maka ụmụ nwoke n’oge anwụ
Mgbe ụfọdụ ugogbe anya maka anwụ abughi naanị ịchebe anyị site na ìhè ma nwee ike ịhụ nke ọma, mana ...
Eardị ntipịrị ntị maka ụmụ nwoke
Ndi nti nwoke
Kedu eriri dị mma maka ogologo ọkpa ọ bụla?
Uwe ejiji iji kpuchie isi na mma
Ugogbe anya maka anwụ dị mma maka ọdịdị nke ihu gị
Eriri kacha dị oke ọnụ n'ụwa, Gucci dere